कारोबार रकम १५ करोडभन्दा कम - Naya Patrika
कारोबार रकम १५ करोडभन्दा कम
काठमाडौं | साउन २४, २०७५
निरन्तर सुस्त गतिमा रहेको बजारले लगानीकर्ताको मनोबल घटाएपछि कारोबार रकममा कमी आउन थालेको छ । बुधबार बजारमा १५ करोडभन्दा कम रकमबराबरको सेयर खरिदबिक्री भएको छ । बजार सुस्त गतिमा रहेका कारण अल्पकालीन लगानीकर्ता पनि ‘पर्ख र हेर’को रणनीति अपनाउन बाध्य भएका छन् ।
बजारमा सेयर आपूर्ति बढेको छ । तर, आपूर्तिअनुसारको माग भने बजारमा देखिएको छैन । बजार विस्तारका कार्यमा भइरहेको ढिलाइका कारण माग नबढेको एक लगानीकर्ताले बताए । बजार विस्तारका कार्य नभएसम्म बजार यस्तै सुस्त गतिमा हुने उनको भनाइ छ । साउन महिना बजार बढ्ने महिना हो । विगतका वर्षमा साउन महिनाको अधिकांश कारोबार दिनमा नेप्से बढेर बन्द भएको हुन्थ्यो ।
तर, चालू वर्षमा यही बजार बढ्ने महिनामा नै नेप्सेले गति लिन सकेको छैन । सोही कारण लगानीकर्तामा अन्योलको वातावरण सिर्जना भएको छ । दीर्घकालीन लगानीकर्ताले पनि अहिले सेयर खरिद गर्न नचाहेको एक ब्रोकरले बताए । नेप्से घट्दा लगानीकर्ता सस्तो मूल्यमा सेयर खरिद गर्न बजारमा प्रवेश गर्ने गर्छन् । तर, अहिलेको समयमा नेप्से कतिसम्म घट्ने हो र कहिले बढ्ने हो भन्ने विश्लेषण गर्न नसकेपछि लगानीकर्ता पर्खाइमा रहेको उनको भनाइ छ ।
बुधबार नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव ८९ अंक घटेर १ हजार १ सय ८७ दशमलव ३२ बिन्दुमा पुगेको छ । ‘क’ वर्गको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स यस दिन शून्य दशमलव १५ अंक घटेर २ सय ५० दशमलव ५० बिन्दुमा पुगेको छ । यस दिन १ सय ६२ कम्पनीको ३ हजार १ सय ६७ पटकको कारोबारमा रू. १४ करोड ९१ लाख ९७ हजार ७ सय ९५ बराबरको ४ लाख ७४ हजार ८ सय ६१ कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएको छ । नेप्सेको १४ दिने आरएसआई यस दिन ४० दशमलव १९ बिन्दुमा पुगेको छ । यस आरएसआई न्युट्रल जोनमा नै रहनुले बजारमा सेयर खरिदबिक्री चाप सन्तुलनमा रहेको संकेत गर्दछ ।
कारोबार रकम, कारोबार संख्या र सेयर संख्याका आधारमा यस दिन फस्र्ट माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड अगाडि रहेको छ । सो लघुवित्त कम्पनीको यस दिन १ सय ५४ पटकको कारोबारमा रू. ८४ लाख ८४ हजार ८ सय १९ बराबरको १९ हजार ५ सय कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएको छ । कम्पनीले १२ दशमलव ६३ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेका कारण लगानीकर्ता सोतर्फ आकर्षित भएका हुन् ।
सपोर्ट माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको सेयरमूल्य यस दिन करिब १० प्रतिशत बढेको छ । नयाँ नेपाल लघुवित्त विकास बैंक र विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयरमूल्य यस दिन ५ प्रतिशतभन्दा बढी घटेको छ । कारोबारमा आएका १ सय ६२ कम्पनीमध्ये यस दिन ५८ कम्पनीको सेयरमूल्य बढेको छ भने ८३ कम्पनीको सेयरमूल्य घटेको छ । बाँकी २१ कम्पनीको सेयरमूल्य भने यस दिन स्थिर रहेको छ ।
कारोबारमा आएका १० समूहमध्ये यस दिन ३ समूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी ७ समूहको परिसूचक घटेको छ । यस दिन होटेल समूहको परिसूचक सर्वाधिक २ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत बढेको छ । त्यसैगरी, अन्य समूहको परिसूचक यस दिन शून्य दशमलव १८ प्रतिशत र जलविद्युत् समूहको शून्य दशमलव १६ प्रतिशत बढेको छ ।
उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक यस दिन शून्य दशमलव ४३ प्रतिशत, जीवन बिमा समूहको शून्य दशमलव ३८ प्रतिशत, वाणिज्य बैंक समूहको शून्य दशमलव १५ प्रतिशत, लघुवित्त समूहको शून्य दशमलव शून्य ९ प्रतिशत, वित्त र निर्जीवन बिमा समूहको शून्य दशमलव शून्य ७ प्रतिशत घटेको छ । विकास बैंक समूहको परिसूचक भने यस दिन शून्य दशमलव शून्य १ अंक घटेको छ ।
एनआइसी एसिया क्यापिटलको साधारणसभा
एनआइसी एसिया क्यापिटलको दोस्रो वार्षिक साधारणसभा भदौ १५ गते कम्पनीको रजिस्टर्ड कार्यालय थापाथलीमा हुने भएको छ । सभामा ७ दशमलव ३६ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने र लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने प्रस्ताव रहेको छ ।
सूर्याको सेयर रजिस्ट्रारमा एनआइसी एसिया क्यापिटल
सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले एनआइसी एसिया क्यापिटललाई सेयर रजिस्ट्रार नियुक्त गरेको छ । साउन २३ गतेदेखि कम्पनीको सेयर रजिस्ट्रारअन्तर्गतको सम्पूर्ण कार्य एनआइसी एसिया क्यापिटलले गर्नेछ ।
प्रभुको सञ्चालक परिवर्तन
प्रभु इन्स्योरेन्सले केदारनाथ गौतमलाई सञ्चालक पदमा नियुक्त गरेको छ । गौतम कम्पनीको संस्थापक सेयरधनी कर्मचारी सञ्चयकोषका प्रतिनिधि हुन् । यसअघि कम्पनीको सञ्चालक समितिमा कोषको प्रतिनिधित्व जितेन्द्र धितालले गरेका थिए । गौतमलाई असार २९ गतेदेखि लागू हुने गरी सो पदमा मनोनयन गरेको कम्पनीले उल्लेख गरेको छ ।
बुधबार नेप्सेले प्रोग्रेसिभ फाइनान्सको मूल्य समायोजन गरेको छ । कम्पनीको २ सय ८१ प्रतिशत हकप्रद सेयरपछिको समायोजन मूल्य नेप्सेले रू. १ सय ७ दशमलव ३५ तोकेको छ । समायोजनका लागि कम्पनीको औसत आधार मूल्य रू. १ सय १७ दशमलव १७ तोकिएको थियो ।
डिप्रोक्स नेपालको साधारणसभा
विकास आयोजना सेवा केन्द्र (डिप्रोक्स नेपाल)ले भदौ १५ गते विकास आयोजना सेवा केन्द्र, केन्द्रीय कार्यालय, थापाथलीमा २५औँ वार्षिक साधारणसभा आयोजना गर्ने भएको छ । सभामा लेखापरीक्षक प्रतिवेदनमा छलफल तथा अनुमोदन गर्ने, लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र सञ्चालक समितिको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव रहेको छ ।
नेपाल हाइड्रो एन्ड इलेक्ट्रिकको साधारणसभा
नेपाल हाइड्रो एन्ड इलेक्ट्रिक लिमिटेडको तेह्रौँ वार्षिक साधारणसभा भदौ १७ गते क्लब डेनोभो होटेल, कालिकानगर बुटवलमा हुने भएको छ । सभामा ५ प्रतिशत बोनस सेयर (कर प्रयोजनका लागि लाग्नेबराबरको रकमसमेत) पारित गर्ने, ५ प्रतिशत नगद लाभांश (कर प्रयोजनको लागि लाग्नेबराबरको रकमसमेत) पारित गर्ने र लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने प्रस्ताव रहेको छ ।
यस्ता छन् सेयर बजार निरन्तर घट्नुका मुख्य १० कारण